Abụ m onye nchịkọta Cisco I-Prize - Biko kwado echiche anyị | Martech Zone
Ọ bụghị mgbe na ohere na-abịa dị ka nke a - ohere iji merie $ 250,000 ma soro ụlọ ọrụ rụọ ọrụ Cisco iji mee ka echiche gị bụrụ eziokwu!
Tupu ị gụchaa, anyị nwere ike iji nkwado gị. Agbanyeghị na ngwa anyị etinyela ya na njedebe, anyị na-ele anya na ịtụ vootu. Ọ bụrụ na ịme ntuli aka ka na-emeghe, anyị ga-enwe ekele ma ọ bụrụ na ị ga-edebanye aha ma votu anyị:
Deba aha maka Cisco's I-Prize Web Site
Banye wee pịa "Nkwalite" na echiche SaaS POS.
Gịnị bụ onyinye m?
Pịa site na Cisco I-Nrite video
Anọ m na-arụ ọrụ na industrylọ oriri na ọ theụtaụ ogologo oge ugbu a iji ghọta na otu n'ime isi okwu Restaurateurs obibi bụ ikike ịchọta na ịnabata teknụzụ n'ụzọ dị mfe ma dịkwa ọnụ ala. N'eziokwu na-ekwu okwu, ụlọ ọrụ na-ochie of Point nke Ahịa na usoro ga-eri ihe karịrị 10% nke a ụlọ ọrụ mmalite-akwụ ụgwọ na ike nke usoro na-nnọọ ejedebeghị.
Companylọ ọrụ m na-arụrụ ọrụ ugbu a bụ onye ndu na ijikọ Usoro Onlinentanetị na sistemụ POS. Ọ bụ ihe ịma aka dị egwu, n'agbanyeghị. Sistemụ POS dị, opekata mpe, afọ iri n'azụ na teknụzụ ma kwadebere kpamkpam maka ecommerce site na weebụ. Kama imeghe usoro ha na ntinye ntanetị, ụlọ ọrụ POS ugbu a chọrọ ụgwọ ikike ikike ọzọ na enweghị ntụkwasị obi na ezughị ezu, na-akpata ezigbo isi ọwụwa maka ụlọ ọrụ dịka m yana ndị na-edozi ahụ.
Ọ bụ ezie na ngwa Office, Ngwa Email na sistemụ Njikọ Ndị Ahịa akwagala na Software dị ka Ọrụ, POS system adịbeghị na ọ bụ ohere kachasị ugbu a na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-agbasi mbọ ike ịnabata azịza akwadoro. N'iburu nke ahụ n'uche, ezitere m echiche m na weebụsaịtị Cisco, nke SaaS naa. Ebumnuche bụ iwepụta sọftụwia POS dị ugbu a ma were ya na ratherntanetị kama ị nweta ya na ngwaike POS.
Uru dị ọtụtụ - ijikọta na ịtụ na ọnlaịnụ na-enweghị ntụpọ. Ọzọkwa, ohere ọhụụ na-ebilite, dịka ịkwụ ụgwọ ego, ụlọ akụ, njikọta azụmaahịa email, ijikọ ekwentị, ọbụlagodi ngwa ahịa (na-apụ salmọn na -emepụta ọkwa na-arịọ onye njikwa ka o nyekwuo iwu. Ọ kwadoro ma zigara usoro ahụ na kọmputa)
Cisco n'ezie nyere anyị ohere dị egwu ebe a ma ọ ga-amasị m ịhụ echiche ahụ na ịmị mkpụrụ. Ekwetaghị m na enwere ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị iji nyere aka zụlite ma webata echiche dị ka ahịa a. Netwọk akụrụngwa chọrọ, nche, na mkpa ahịa technology… ndị a niile bụ nke ọma nke Cisco!
Lelee anya Cisco I-Nrite nke Blog maka nkọwa ndị ọzọ.
Echefukwala ịkwalite echiche anyị !!! Ndi otu a bu Bill Dawson, Carla Ybarra-Dawson na Jason Carr.
Tags: Ciscoonyinye Ciscocisco iprize
M pịrị na Nkwalite! Olileanya na ọ na-arụ ọrụ.
Daalụ nke ukwuu maka nkwado gị, Shawn! Echere m na anyị ejirila ezigbo ngwa nweta ọtụtụ ohere iji gbanwee mpaghara. O yighị ka anyị nwere ọtụtụ nlebara anya na mpụga ndị ọka ikpe, agbanyeghị, yabụ ana m anwa ịme ụfọdụ votu.
Anyị nwere ekele maka nke gị!
Ejirila m nkeji iri gara aga na-achọ ịme akaụntụ na saịtị ahụ wee votu gị. Ozugbo m gafere ihe ndị nzuzu chọrọ maka paswọọdụ ahụ, anọgidere m na-enweta ihuenyo njehie ASP mgbe m ga-anwa ido onwe m n'okpuru.
Aga m agbalịa ọzọ ma emechaa, enwere m ike ịbanye! Ndo!
M onwe m na-eche na echiche dị oke mma. Intuit mere nke a na ngwanrọ na-aza ajụjụ afọ ole na ole gara aga na ọ bụ nnukwu ngwá ọrụ maka ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ.
O di nwute, echeghị m na ị bụ onye izizi iji kwalite ụdị echiche a. Amaara m ụlọ ọrụ ole na ole na-arụ ọrụ n'echiche ugbu a. Aga m agbanye gị vootu. Ike na ihe onwunwe nke Cisco karịrị nke ụlọ oriri na ọ restaurantụ Pụ POS niile!
Na-ada ka ihe ga-achọ ọrụ ndị ahịa-dị mkpa, ma eleghị anya iji Adobe AIR? Ma ọ bụ na ọ gaghị abụ Cisco-ish ezu?
Mike - ị dị mma, ụlọ ahịa data mpaghara ga-abụ ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na njikọta agbadata. AIR bụ n'ezie ihe mmụọ nsọ na-ekpebi ma nke a ọ bụ ezi uche. AIR ga-eme aghụghọ ahụ, mana ọ bụrụ na Cisco mepụtara onye ahịa dị mkpa, nke ahụ ga-arụ ọrụ nke ọma!
Nke a dị mma - jisie ike. Mgbe ị merie, Ga-amasị m N'ajụjụ ọnụ m na saịtị 😉